COVID Vaccine Sirinji Zvino Inomhanya Yakaderera: Inogona Kuisa Mungozi Majekiseni
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » COVID Vaccine Sirinji Zvino Inomhanya Yakaderera: Inogona Kuisa Mungozi Majekiseni
Zvinofungidzirwa kuti kune musika wepasi rose gap re 1.2 bhiriyoni autodisable (AD) sirinji-yakachengeteka-jekiseni michina yeCOVID-19 vaccine kuendesa. Iyi gap gap ine njodzi yekuve bhodhoro rinogona kutyisidzira kuendeswa kwenguva kwemishonga yekudzivirira muhafu yenyika dzePasi.
Musi waMbudzi 11, PATH neUnited Nations Children's Fund (UNICEF) vakaita Global COVID-19 Vaccine Syringe Industry Convening vachiunza pamwechete vanopfuura gumi nevaviri vevagadziri vesirinji pasi rose uye masangano akasiyana siyana kuti afambise pachena pachena pamusika weAD sirinji kubatsira. kusimudzira kupihwa kwekudzivirira kweCCIDID-19 pamwe nekubaya kwemazuva ese. Vagadziri vakasimbisa akakosha epasi rose AD sirinji yekupa matambudziko kubva mukupera kwa2021 kusvika pakati pa2022, kunyangwe zvakapetwa katatu kugadzirwa kwavo uye kuedza nemasangano emarudzi akawanda kuchengetedza mamwe majekiseni eAD kune nyika dzine mari yakaderera nepakati dzinoda.
Iyo inofungidzirwa spike mukuda kwemajekiseni eCCIDID-19 vaccine, inofungidzirwa kuti inodarika mabhiriyoni mana kubva mukupera kwa4 kusvika pakati pa2021, imhaka yekuvhiya kunofungidzirwa muCCIDID-2022 yekudzivirira dosi yekuendesa kunyika dzinouya kuburikidza neCOVAX, hombe. zvipo kubva kuhurumende, uye zvibvumirano zviviri. Zvichienderana nedata rekupa uye kudiwa kwepasirese, iyo PATH modelling inofungidzira gaka repasi rose remabhiriyoni 19 emasirinji eAD.
Njodzi dzekupihwa kwesirinji senge kurambidzwa kunze kwenyika, kunonoka kwekutakura, mitsetse mitsva yekugadzira kutadza kugamuchira World Health Organisation (WHO) prequalification, kana kunonoka kupedzisa kurongwa kwekuwedzera kwekugadzira kunogona kuwedzera gaka rinopfuura mabhiriyoni maviri panguva ino. Booster doses inogona kugadzira kuwedzera kudiwa kumanikidza pamusika.
Kubaiwa kwemajekiseni eAD chete munyika dzinoda kusvika makumi manomwe, uye nyika 70 dzinoashandisa kubayisa mamwe majekiseni. Kubva muna 30, WHO, UNICEF, uye United Nations Population Fund dzakakurudzira kushandiswa kwemajekiseni eAD pasi rose pakubayisa majekiseni sezvo “achipa ngozi yakaderera yokutapuriranwa kwomunhu mumwe nomumwe utachiona hunoparadzirwa muropa hwakadai sehepatitis B kana kuti HIV” nekuti tsono dzeAD sirinji hadzigone kubviswa kana kushandiswazve.
Zvakakosha, ese majekiseni eAD anopa madosi akatarwa, zvichireva kuti anogona kuzadzwa chete nehuwandu chaihwo hwedhosi rimwe chete rekudzivirira. Majekiseni mazhinji, kusanganisira aya ekubaisa kwevacheche kwakakosha, anopihwa pachishandiswa 0.5-mL yedosi yevhoriyamu uye inofananidzwa nesyrinji yeAD. Zvipingamupinyi zvekugadzirisa zvine chekuita nekuunza majekiseni eAD akawedzera nekuvandudza majekiseni ekudzivirira, senge kuwanikwa kukuru kwemushonga wePfizer unoda specialty low-dead-space 0.3-mL AD syringe, isina kumbobvira yagadzirwa. Saizi mitsva yemajekiseni inotsausa mitsetse yekugadzira kubva mukugadzira akajairwa majekiseni eAD uye anowedzera kumatambudziko ekufananidza majekiseni ejekiseni nehukuru chaihwo hwesirinji panguva yekubaiwa.
Zvingangove nzira dzekuzadza gap kuti ikurumidze kupinda, kuderedza kunonoka, kuvandudza kuchengetedzwa, uye kuvaka inogoneka zvinosanganisira:
• Wedzerai hunyanzvi hwekugadzira kuburikidza nekudyara zvine hungwaru uye zvinokurudzira kuti muvake zvinhu zvinogoneka uye kuderedza kunonoka kwekufambisa: Vanopa, vanoisa mari, uye hurumende vanogona kutora matanho anoshandiswa kukurudzira vatengesi vemishonga, kusanganisira rubatsiro, zvikwereti zvisingabhadharwi kana mubereko wakaderera, uye vimbiso yehuwandu. gadzirisa imwe njodzi kune vatengesi. Zvinonyanya kukosha kuwedzera kugadzirwa kwemasirinji emuno muAfrica neLatin America, uko kune kushomeka kwekushandisa uye nguva refu yekutumira kune mhiri kwemakungwa.
• Ongororazve mamiriro ekushandiswa: Kusvikira kushomeka kwejekiseni reAD kwagadziriswa, nyika dzinokwanisa kushandisa mamwe marudzi emajekiseni edziviriro dzinogona kubatsira kuchengetedza majekiseni eAD kunyika dzine masystems ehutano akaomerwa.
• Gadzirisa mavhoriyamu ejekiseni rekudzivirira: Kana vagadziri vejekiseni vakagadzira mitsva yekudzivirira yeCCIDID-19, zvinosimudzira, uye majekiseni evana kuti aenderane nearipo majekiseni edhasi reAD, zvinogadzirisa zvinhu, kugadzira, uye mishandirapamwe yekudzivirira.
• Kudzivisa zvirango zvepasi rese zvekutengesa kunze kwenyika izvo zvinowedzera kuganhurira kuwanikwa kwejekiseni: Nyika dzine hunyanzvi hwekugadzira majekiseni dzingabatsira kugadzirisa mikaha yepasi rose kuti izadzise 70 percent yechinangwa chekudzivirira.
PATH icharamba ichitarisisa musika, paine zvinotarisirwa zvigadziriso kune data muna 2022 kana paine shanduko dzakakosha. Yakapfuura PATH modhi yakaburitswa muna Zvita 2020 yakaratidza njodzi dzakakosha, dzinosanganisira kusavimbika kwekuda pamwe nenguva, kutumira zvinhu, uye zvimhingamipinyi zvekuchengetedza.